तपाइँको अनलाइन व्यक्तित्वको सुरक्षा | Martech Zone
तपाइँको अनलाइन व्यक्तित्व संरक्षण गर्दै
सोमबार, फेब्रुअरी 25, 2008 सोमबार, फेब्रुअरी 25, 2008 Douglas Karr
जब विश्व डिजिटलाइज्ड छ र हरेक शब्द तपाईले भन्नु भएको र गर्नु भएको कार्य तपाईलाई भिडियोमा समात्न लगाइन्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई आफैले पुलिस हुनुहोस। यो व्यवसायका लागि कुञ्जी हो जसले ब्लगिंग र सोशल मिडियामा उनीहरूको मार्केटिंग प्रयासहरू खोल्न चाहन्छन्।
बेसबल खेलमा एक सहकर्मीलाई भेट्नुपर्दा र उनीहरूले तपाईंलाई घमण्डी र पिउने कुरा देखाउँदा विगतमा ठूलो कुरा भएन, अनलाईनमा व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवनको सीमा हुँदैन। यदि तपाईंसँग एक अनलाइन व्यक्तित्व छ, त्यो कामको लागि तपाईंको व्यक्तित्व हो। लिंकिंगइनमा डेटि website वेबसाइटबाट कसैले तपाईंलाई छुट्याउँदैन - तपाईं 'अनलाइन' मात्र हुनुहुन्छ।
अनलाइन ईतिहास पहिले नै मानव संसाधन उपकरण हो
रोजगारदाताहरू पहिले नै प्रयोग गर्दैछन् गुगलका कर्मचारी खोज्न र अनुसन्धान गर्न। तपाईं चाहानुहुन्छ अन्तिम चीज भनेको ट्रेल, व्यक्तिगत वा व्यवसाय छोड्नु हो, यसले तपाईंको कम्पनी वा सम्भावनाले तपाईंलाई कसरी बुझ्ने असर गर्दछ।
केही वर्ष अघि मैले एउटा कम्पनीमा काम गरें जहाँ एक अनुपयुक्त वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा पोष्ट गरिएको थियो र यसले गोलहरू बनायो। यद्यपि यस व्यक्तिको कामसँग कुनै सरोकार छैन, यो व्यक्तिको व्यवस्थापन कर्मचारीको कार्यालय भित्र नोट गरिएको थियो - त्यो चिन्ह जुन अपरिवर्तनीय थियो र त्यसले व्यक्तिको पदोन्नति गर्ने वा संगठन भित्र अन्य रोजगारहरू ग्रहण गर्ने क्षमतामा चोट पुर्‍याउँछ।
एक भिडियो रेकर्ड
म समय खर्च गर्दै छु सेस्मिक, ढिलो, एक अनुप्रयोग जुन भिडियोको कुराकानीको मिश्रण (र एकीकरण) को क्रममा छ। एक मित्रले आज राती टिप्पणी गरे कि उसले वास्तवमा केहि देख्यो कि मान्छेहरुमा व्यवहार बारे कि उसले अन्यथा आदर गरेको थियो।
समस्या दुई गुणा हो: सीस्मिक लगभग वास्तविक-समय हो, त्यसैले व्यक्तिहरू कुराकानी गर्छन् र कहिलेकाँही कुराकानी तातो हुन्छन्। अर्को अंश Seesmic ले पेशेवर र व्यापारको बिचको अन्तरमा पुर्‍याउँछ। केही व्यक्तिहरू कुराकानी गर्दा रक्सी पिउँदछन् ... केहि रक्सीले मातिएका हुन्छन्। अन्य मानिसहरु धर्म र / वा राजनीति मा कुराकानी मा विस्फोट छन्।
विश्व तयार छैन
यो अद्भुत कुरा हो कि हामीसँग यससँग टेक्नोलोजी छ जहाँ एक व्यक्तिले उनको आत्मालाई बोक्न सक्छ र विश्वभरका साथीहरूसँग यत्तिको प्रभावकारी संवाद गर्न सक्छ। समस्या यो छ कि विश्व यस प्रकारको पारदर्शिताका लागि अझै तयार छैन। Seesmic जस्ता उपकरणले काम, जीवन ... मा व्यक्तिको विचारहरूमा एक टन अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न सक्छ र तिनीहरूको स्थिरतामा केही इनपुट प्रदान गर्दछ।
कोही, जो अन्यथा एक उत्तम कर्मचारी हुन सक्छ, एक हायरिंग म्यानेजर बसे र तिनीहरूको अनलाइन कुराकानीको घण्टा समीक्षा गरेपछि अवसरहरूबाट हटाउन सकिन्छ।
तपाईंको व्यक्तित्व सुरक्षित गर्दै
त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको अनलाइन व्यक्तित्व र प्रतिष्ठा लाई बचाउन:
सेक्स, धर्म, राजनीति, आदि मा चार्ज गरिएको कुराकानीलाई वेवास्ता गर्नुहोस् जहाँ तपाईं गलत विचार लगाउन सक्नुहुन्छ कि विचार इंजेक्शन गर्न सक्नुहुन्छ। ती कुराकानीहरू अफलाइन लिनुहोस्।
कुनै पनि औषधि वा मदिरा अनलाइनको प्रभावमा पर्नबाट जोगिनुहोस्। तपाईं केवल आफ्नो भावनाहरू र कार्यहरूको नियन्त्रणमा हुनुहुन्न।
सँधै दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईले गर्नु भएको सबै कुरा तपाईको स्कूल, कार्य, रिपोर्टरहरू, सरकार, र परिवारले पनि पहुँच पुर्‍याएको रेकर्ड हो।
न्यूनतम जोखिम र जोखिम हटाउने
केहि कार्यक्रमहरू, अनलाइनहरू पनि, तपाईंको सामग्री मेटाउने प्रस्ताव गर्दछ। सेवाका सर्तहरू पढ्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईं स्थायी रूपमा भिडियो, ध्वनि, ईतिहास हटाउन सक्षम हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईंले आफूलाई गल्ती गरेको कुनै अवस्थामा पनी आफूलाई फेला पार्नुभयो भने, यसलाई हटाउन सक्दो प्रयास गर्नुहोस्। खैर, तपाईको सफल हुने संभावनाहरू धेरै, धेरै पातलो छन्।
पातलो पार्नुहोस्। यदि तपाईंसँग १० मा १ कुराकानी छ जसले तपाईंलाई राजनीतिमा तपाईंको शीर्ष उड्ने देखाउँदछ, तपाईंको शीर्षलाई नहेरीकन अर्को १००० कुराकानीहरू पक्का गर्नुहोस्। अनलाइन अधिक सकरात्मक सामग्री प्रदान गर्नाले नकारात्मक सामग्रीको जोखिमलाई कम गर्दछ जो कसैले फेला पार्न सक्छ। फेरि, यो मुर्ख छैन, तर यसले मद्दत गर्न सक्दछ।
सोच्नुहोस्! उत्तम सल्लाह कहिले पनि अनलाइन स्थितिमा जानु हुँदैन जुन तपाईं पछि शर्मिन्दा हुन सक्नुहुन्छ। केवल यी परिस्थितिहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नुहोस्।
म आशावादी छु कि कुनै दिन हामी त्यस्तो समुदाय बन्नेछौं जुन धेरै व्यवहार (सहि व्यवहार) लाई सहिष्णु हुन्छ, र यो बुझ्दछ कि खराब मानिसहरुमा खराब मानिसहरु हुन्छन् र राम्रो मानिसहरु लाई पनि गल्ती गर्छन्। तर त्यतिन्जेल, तपाइँ कसरी अनलाइन व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्नेमा कडा नजर राख्नुहोस्।
मैले यो कुराकानी गर्नै पर्छ कि यो कुराकानी आंशिक रूपमा प्रेरित थियो डा। थॉमस हो, जो एक अनलाइन व्यक्तित्व सिर्जना को विषय मा ब्लग गरीएको छ।
फेब्रुअरी १,, २०११ 25:१:2008 अपराह्न
हामी समस्यामा पर्न सक्ने ठूलो जोखिममा दौडन्छौं जब हामी "व्यक्तित्व" को हिसाबमा सोच्न थाल्छौं या त लाइन। यसको मतलब यो हो कि हामी आफैं होइनौं र जानाजानी केहि चीज लुकाइरहेका छौं वा केही नभएको जस्तो देखाउँदैछौं।
यस्तो प्रकारको सोच खतरनाक हुन सक्छ किनकि जब मानिसहरू अज्ञात हुन्छन् भन्ने सोच्दछन् भने परिणामहरू छुट गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ।
डग मलाई पनि लाग्छ तपाईं माथिको तपाईंको कथन मध्ये एक मार्क को एक टच विस्तृत थिए। एउटा शब्द थप्नुहोस् र म तपाईंसँग छु।
तपाईंले चाहानु भएको अन्तिम चीज भनेको ट्रेल, व्यक्तिगत वा व्यवसाय छोड्नु हो, जुन [नकारात्मक] कसरी प्रभाव पार्छ तपाईंको कम्पनी वा संभावनाले तपाईंलाई बुझ्दछ।
मलाई पक्का आशा छ हुनेछ be सकारात्मक मेरो अनलाइन ट्रेल द्वारा प्रभावित। यो म हो जो को एक हिस्सा हो र मूल्य म टेबल मा ल्याउन।
र जहिले पनि मँ मानिन्छु कि आमा र एक भविष्य नियोक्ता दुबैलाई हेरिरहेको हुनेछ जुन म अनलाइन राख्छु। यसले मलाई आत्म नियन्त्रण र विशेष गरी मूर्ख सामानको छोड्नेमा मद्दत गर्दछ।
राम्रो प्रतिक्रिया, क्रिस!
म आदरपूर्वक असहमत हुन्छु कि एक अनलाइन व्यक्तित्व लुकाइरहेको छ वा बहाना गरीरहेको छ।
यदि म एक सम्भावितको साथ बैठकमा जान्छु भने, म दाढी गर्छु र सूट लगाउँछु। हरेक दिन काममा म खाकीज लगाउँछु र केहि हप्ता दाढी गर्दछु। घरको बाटोमा म कारमा केही धातु क्र्याk्क गर्न सक्छु, तर यदि म वरिपरि ग्राहकलाई ड्राइभ गर्दैछु भने, म एसी / डीसीमा फाल्दिन।
मसँग एक व्यंग्यात्मक बुद्धि पनि छ जसले कहिलेकाँही केही मानिसहरूलाई पक्रन सक्छ। जब म साथीहरू वा सम्भावनाहरूसँग हुन्छु, म विरलै हास्यको भावना प्रदर्शन गर्छु किनभने धेरैले यसलाई अनुपयुक्त ठान्न सक्छन्।
सबै केसहरूमा, म बेइमान भइरहेको छैन वा लुकाइरहेको छैन वास्तविक म म केवल मेरो 'सर्वश्रेष्ठ पक्ष' वा 'सबैभन्दा उपयुक्त पक्ष' देखाउँदै छु। यो अझै म नै हो (मलाई विश्वास गर्नुहोस् - म गल्तीको लागि पारदर्शी छु), तर यो आवश्यक छ यदि म बिस्तारै दर्शकहरूमा पुग्न चाहन्छु र जनताको आदर पाउन चाहन्छु।
मेरो कुरा वास्तवमा त्यस्तो कुरा हो जसमा हामी सहमत हुन सक्छौं - विश्व अझै पनि यस प्रकारको पारदर्शिताका लागि तयार छैन। म चाहन्छु यो थियो - त्यसो भए म खाकीमा लुगा लगाउँन सक्थे, दाह्री नबनाउनका निम्ति र रक टु रकका लागि केहि "क्रक गर्न" मेरो साथीहरूसँग।
यद्यपि कुनै पनि समय भइरहेको छैन।
म त्यहाँ तपाईं संग छु, डग। म विन्डोज खोलेको साथ रेडियो संग गाउँछु up!
स्टप लाइटमा बसिरहेको व्यक्तिको लागि यो एक चीज हो मैले सोच्न कि म अलिकति बेकार छु। तर विन्डोज खोल्दैछु भनेर प्रमाणित गर्न यो अर्को कुरा हो!